Maalinta: Noofambar 2, 2018
Özden Polat waxaa lagu xusay Salaadaha
Özden Polat, gudoomiyihii dambe ee Gudiga Wadajirka iyo Wadajirka ee Dhismaha Wadada Tareenka iyo Qaliinka Shaqaalaha (YOLDER), oo u dhintay wadne istaag, waxaa lagu xasuustaa Mevlid-i Şerif ee TCDD Alsancak Train Masjid. [More ...]
Macaamiisha Macaamiisha ee Istaraatiijiyada
Si aad ugu tagtid garoonka diyaaradaha cusub tagsi waxaad u baahan tahay inaad lacagta ka soo qaadatid tikidka diyaaradda, taas oo ah haddii aad ka heli karto taksi inuu ku qaado. Waxaa la furay garoonka cusub ee Istanbul. Basaska dawlada hoose waxaa laga heli karaa shan nooc [More ...]
Dowladda Hoose ee Magaalada Kayseri waxay billowday adeegga gaadiidku inay ku sii fududaato baska u dhexeeya inta u dhexeysa Oktoobar 31. Gaadiidka Dawlada Hoose Weyn Inc. wuxuu abuuray labo xariiq oo kala duwan oo loogu talagalay adeeggan muhiimka ah. Dawlada Hoose ee Magaalada, inbadan [More ...]
Kardemir oo ku guuleystay 3 Million TL Qeybta 47.5
Warshadaha Birta iyo Birta ee Karabük (KARDEMİR), 47,5 milyan oo rodol oo rodol oo saafi ah ayaa helay faa'iidada seddexaad ee sanadkaan. Bayaanka laga soo saaray warshadda ayaa u dhigan sidan; Shirkadeena waa 2018 ee 3, sanadka sarrifka aadka u sarreeya. Saddexdii bilood ee ugu [More ...]
Iskudhin-Denizli Isdilidda Ka Dib markii uu ku soo booday Tareen Tareen
Nin aan la aqoonsan oo ku nool degmada Gaziemir ee Izmir ayaa isdilay isaga oo ku booday hore tareenka rakaabka ah ee ka tagaya Izmir kuna sii jeeday Denizli. Shilka ayaa shalay ka dhacay xarunta istaagga ESBAS IZBAN ee loo yaqaan '16.00 darajo'. Sida ay sheegayaan wararka laga helay Izmir [More ...]
Gawaarida iyo Gaadiidka TIR Garwaha Adeega
Si looga hortago in si ku-meelgaar ah u dhigashada gawaarida gawaarida iyo kuwa xamuulka qaada ee magaalada dhexdeeda ah looguna raaxeeyo isu socodka magaalada, ayaa howlgalka Gawaarida Xamuulka iyo Gawaarida waxaa dhameystirey Dawladda Hoose ee Magaalada Denizli. [More ...]
Guddoomiyaha Cusub: Alm Waa inaan qaadannaa gaadiidka Qaranka
Menderes Türel, Duqa Magaalada Caasimadda, ayaa ka hadlay xafladda abaalmarinta ee ATSO wuxuuna sheegay inay sameeyeen maalgashi rikoor ah Antalya sanadihii ugu dambeeyay ee 5. [More ...]
Wadooyinka Baaskiilada ee Gaziantep Sanadkii la soo dhaafay waxay isticmaaleen 20 Thousand People
Dowlada Hoose ee Gaziantep waxay isticmaashay 20 kun oo 207 qof sanadkii lasoo dhaafay wadooyinka baaskiilkiisa si loo yareeyo socodka magaalada. socdaalka ugu Turkey ee caanka ah kordhay Gaziantep, mid ka mid ah magaalooyinka [More ...]
Hawlaha Dheeraadka ah ee KPSS ee ka socda Degmada Kocaeli
Dawlada Hoose ee Magaalada Kocaeli, 4 Noofambar 2018 Xulashada Xulashada Dadweynaha waxaa la qaban doonaa Axadda isla maalintaas si looga fogaado gaadiidleyda musharixiinta inay abaabulayaan duulimaadyo dheeri ah. Macnaha guud; 13, 210, 755, 255, [More ...]
Jimicsiga Dab-demiska ee Tuulada Isticmaalka ee Istanbul
Si loo awoodo inuu si wax ku ool ah wax uga qabto dababka dhulka hoostiisa mara, qalliinka dabka ee khaaska ah waxaa fuliyey Waaxda Dabka ee Istanbul oo ku taal Ataturk Auto Industry Metro. Amniga Megaşehir Amniga wadada ugu culus ee Istanbul [More ...]
Boogaha Dhiigbaxayga ee Dalka
Marka la sameeyo transit-ka tareenka ee loo maro waddankayaga, xNUMX kun oo 3 kiiloomitir kiilooga gaaban ayaa la dabooli doonaa. Nasiib darrose, uma adeegsan karno faa'iidadan sanado. Hal boqolkiiba oo dakhliga 545 bilyan doolar ee gaadiidka Euro-Aasiya [More ...]
Guddoomiyaha Sahin: "Shaqadeenu waa Samsun Awoodeed"
Maayarka Magaalada Samsun, Duqa Magaalada Zihni Sahin ayaa sheegay inuu u mahad naqayo qofkasta oo ka shaqeeya inuu u dhaqaajiyo dhinacyada ganacsiga, dalxiiska iyo dhaqaalaha meel sare oo liiska ah. Samsun weyn [More ...]
Line Rail Turkey ee ugu horeysay oo kaliya supersonic imtixaanka ka furmay!
Khadka Imtixaanka Wadada Tareenka ee 'TÜBİTAK SAGE' iyo Xarunta Imtixaanka halka xariiqda ku taalo waxaa furay Madaxweyne Recep Tayyip Erdoğan. Mashruucan, oo uu dhammeystirey Yapı Merkezi oo ah mashruuc boodhadh, ayaa gabi ahaanba lagu dhammeystirey xarumaha maxalliga ah. TUBITAK [More ...]
Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha M. Cahit Turhan, si dual gaarey 26 472 kun oo kiiloomitir ee Turkey carriageways mahad sheegay in faa'iidooyinka dhaqaale ee sanadlaha ah million pounds 17 650 billion. Turhan, ayaa sheegay in war qoraal ah oo, ee Turkey [More ...]